CMP भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » C बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» सीएमपी
CMP को संक्षिप्त रूप हो सहमति व्यवस्थापन प्लेटफर्म.
GDPR र TCPA जस्ता सान्दर्भिक सञ्चार सहमति नियमहरूसँग कम्पनीको अनुपालन सुनिश्चित गर्ने उपकरण। CMP भनेको कम्पनी वा प्रकाशकहरूले उपभोक्ताको सहमति सङ्कलन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने उपकरण हो। यसले डेटा प्रबन्ध गर्न र पाठ र इमेल सेवा प्रदायकहरूसँग साझेदारी गर्न मद्दत गर्दछ।